Fantatrao ve ny Vaomieran’ny Aim-panahy? – FJKM Ambavahadimitafo Fantatrao ve ny Vaomieran’ny Aim-panahy? |
Fantatrao ve ny Vaomieran’ny Aim-panahy?
Publié le 31 mars 2009 à 01:03
Ny faritra ety Ambavahadimitafo dia tena azo lazaina hoe faritra mena (zone rouge). Ety no ivarotana ny rongony, betsaka ny mpivaro-tena, be dia be ny fanambadiana tsy vita ara-dàlana sy ny ady any an-tokan-trano tsy mety voaravona…
Ny Vaomieran’ny Aim-panahy moa dia niorina indrindra noho ny fitoriana ny Filazantsara eto amin’ny faritr’Ambavahadimitafo sy ny manodidina.
Ka izay no tena antony nijoroan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy ; ka mba hitaomana ny olona mba hihaona amin’i Kristy satria ao Aminy no ahitana ny fiainana tena tonga lafatra.
Sarotra anefa ny mitaona olona ho an’i Kristy satria indraindray izy hita, indraindray tsy hita. Ka tsy maintsy mitady hetsika hafa, mety tsy mahazatra ny fiangonana, mba ho entina misarika azy ireo.
– Toy ny natao tamin’ny volana Febroary 2009, dia notaomina ny olona tamin’ny alàlan’ny famafana làlana ny olona. Tao aorianny famafana làlala dia nisy ny fiarahana misakafo ; ary mandritra izany no manararaotra mitory an’i Kristy. Zavatra miovaova tahaka izany no atao ao, izay samihafa noho ny fotoana isak’alahady izay hidirana amin’ny ora voatondro ka hiravana amin’ny ora voatondro koa
– Misy koa ny Tafika masina an-davan’andro izay hamamgiana ny olona tsotra eto amin’ny faritra manodidina ka hitaizana azy mba hihiditra tsikelikely amin’ny fiainana ara-panahy.
– Isaky ny Alarobia hariva ao amin’ny Akany Ralibera Daniel dia misy ny fotoam-pivavahana amin’ny endrika tena tsotra izay natao indrindra ho an’ireo olona tsy tafiditra ety am-piangonana mihitsy
Tanjona sy Vokatra :
Ny olona hiantefan’ny asa moa dia olona samihafa be satria tsy mpiangona eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo ny ankabeazany ; mety ho katolika izy, na fjkm, na advantista na mety ho tsy manana finoana mihitsy aza.
Sarotra ihany ny mandrefy ny vokatry ny asa. Kanefa isaky ny hetsika lehibe ataon’ny Vaomieran’ny Aim-panahy, in-telo ao anatin’ny taona, iantsoana mpanao hira ara-pilazantsara na mpitoriteny avy any ivelany dia tena feno hipoka ny trano.
Ny firafitry ny Vaomieran’ny Aim-panahy :
Ny mpitandrina Rakotoharintsifa Andrianjatovo no ray aman-dreny manapa-kevitra ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy.
Ramatoa Ranaivoson Faramalala vadiny kosa dia manokana fotoana maro ao amin’io vaomiera io, ka izy no mandrindra sy mandamina, mitady mpiara-miasa , mamorona programa ary mitady olona manafana an’io Vaomieran’ ny Aim-panahy io.
Tamin’ny taona 2007 no niforona ny Vaomieran’ny Aim-panahy. Samihafa noho ny sampana ny vaomiera noho ny firafiny eo anivon’ny fiangonana.
Hiadidian’ny fiangonana feno ny fandaniana ao anatiny :
Tsy ny fotoana hiasana no maha vaomiera ny vaomiera fa noho ny fiadidian’ny fiangonana azy. Izany hoe tsy mahazo manao fitadiavam-bola izy fa ny budget iray manontolo dia avy amin’ny fiangonana. Raha tsy ampy anefa izany dia afaka mangataka fanampiana amin’ny malala tànana ihany izy, toy izay efa natao tamin’ny hetsika rehetra teo aloha.
Tsy mitovy amin’ny Komity koa izy, izay voafetran’ny hetsika iray ny fotoana iasany.
Firafitry ny Vaomieran’ny Aim-panahy :
Saika manana Vaomieran’ny Aim-panahy daholo ny fiangonana rehetra. Ny mampihavaka azy fotsiny dia ny tsy fanànany Filoha, na sekretera na mpitahiry vola ; kanefa manana kahie mitahiry ny fandaniana ara-bola madio anefa izy mikasika ny fandaniana rehetra.
Somary mihavaka ny mpikambana eto amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy eto amin’ny FJKM Ambavahadimtafo, satria ny 80% dia ireo mpianatra ho mpitandrina ; izany hoe tsy raikitra. Izany hoe rehefa vita ny fianarany dia efa mety tsy ho mpikambana intsony izy. Ny mpikambana hafa koa dia saika manao izany an-tsitrapo avokoa.
Misy kosa anefa ny fepetra takiana raha hiditra ho Vaomieran’ny Aim-panahy. Izany hoe tsy maintsy mandalo fihofanana in-droa isan-taona. Izany fihofanana izany dia mahakasika ny Vaomieran’ny Aim-panahy, ny fanoloran-tena, ny maha-kristiana, ny tafika masina.
Ny olona miditra ho Vaomieran’ny Aim-panahy izany dia tsy maintsy mahalala izay antso manokana ho azy izay amin’ny Fitoriana ny Filazantsara, tsy maintsy manao fanoloran-tena ihany koa izy.
Noho ny hamafin’ny adim-panahy betsaka hatrehina ao no mahatonga izay fepetra rehetra izay ka mampiavaka azy kely amin’ny fidirana sampana hafa.